काठमाडाैँ क्षेत्र नं ४ काे सभापतिमा काे ? दावी विनाकाे हल्ला धेरै‍‍‍‍… « Bagmati Page
काठमाडाैँ क्षेत्र नं ४ काे सभापतिमा काे ? दावी विनाकाे हल्ला धेरै‍‍‍‍…
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसकाे १४ औँ महाधिवेशनकाे मिति नजिकिँदै गर्दा अधिवेशन केन्द्रित गतिबिधिले तीव्रता लिएकाे छ । देशभर काँग्रेस पार्टीकाे हरेक तहतप्का यतिखेर छलफल तथा दाैडधुपमा व्यस्त छ । तर गगन थापाकाे चुनावी क्षेत्र काठमाडाैँ क्षेत्र नं ४ भने साेचेजति सक्रिय भएकाे देखिदैन । केही नामहरूले इच्छा चाहना राखेकाे भनिए पनि अझै कसैले पनि क्षेत्र नं ४ काे सभापति भनेर दावी गरेका छैनन् ।
आधिकारिक दावी नभए पनि केही नामहरू भित्रभित्र आफू सभापति उठ्ने भनेर दाैडधुप गरेकाे बताइए पनि नेता गगन थापाले ग्रिन सिग्नल नदिएसम्म कसैले पनि दावी गर्न सकेकाे देखिदैन । संभावित सभापतिकाे उम्मेदवार बन्ने नामहरू भनिएका श्यामकृष्ण सङ्गत, विनाेद चालिसे, इन्द्र थापा, अच्युत पाैडेलआदि गगन थापाकाे ग्रिन सिग्नल खाेजिरहेका छन् । ग्रिन सिग्नल खाेज्नेहरूमध्ये काे अगाडिकाे पछाडि बारे अझै निर्क्याैल नभए पनि वर्तमान क्षेत्रीय सभापति राजु श्रेष्ठले यसपटक गगन थापाले जसले भने उसैलाइ सहयाेग गर्ने भन्ने हल्ला चलेकाे छ ।
हल्लाका आधार मान्ने हाे भने, पत्रकार तथा लेखक केशव पाठकलाइ सर्वसम्मत सभापति बनाउन लागिएकेा भन्ने चर्चा पनि क्रमशः मजबुत हुँदै गएकाे देखिन्छ । पाठक आफैले भने याे बारेमा कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् । यसैबीच साधुराम खड्कादेखि रामकृष्ण केसीसम्मका नेताहरू सभापतिमा दावी गर्न सक्ने भनेर हल्ला चलेकाे छ ।
जसले जति हल्लाकाे खेति गरे पनि क्षेत्र नं ४ काे सभापति गगन थापाकाे हातमा नै देखिन्छ । याे विषयकाे गाम्भीर्यता बुझेका श्यामकृष्ण संगत एवम् विनाेद चालिसे माैन नै छन् । उनीहरू भेटघाटमा देखिए पनि हल्लामा धेरै तल्लिन देखिदैनन् । धेरैले संगत र चालिसेमध्ये एकलाइ थापाले सभापति बनाउने छन् भनेर साेचिरहेका छन् ।
हाल जिल्ला सदस्य रहेका इन्द्र थापालाइ सभापति बन्न साम दाम दण्ड भेद सबै प्रयाेग गरिरहेकाे देखिन्छ । उनकाे सभापति सम्भावना कमजाेर छ, उनकाे महत्वकाँमाथि गगन थापाले रिक्स माेल्दैनन् भन्ने तर्क मजबुत बनिरहेकाे बताइन्छ ।
त्यसैगरी राजु श्रेष्ठसँग तुलनात्मकरूपमा निकट मानिएका अच्युत पाैडेललाइ संभावित सभापति भन्नेहरू पनि छन् । तर याे विषयमा गगन थापाले हरियाे चिन्ह लगाउनका लागि पाैडेलकाे कसरत कम भयाे भन्नेहरू धेरै छन् । तथापि उनकाे सम्भावना टरिसकेकाे भने देखिदैन ।
चुनाव नगरिकन सर्वसम्मत तरिकाले सभापति छान्ने कसरत भएकाे भनेर हाल क्षेत्रीय सभापति राजु श्रेष्ठले बताएका कारण एक व्यक्ति छान्न पर्दा तुलनात्मकरूपमा गगन थापामैत्री तर सहज र सरल व्यक्ति छानिने सम्भावना छ । याे सम्भावनाकाे कसीमा संगत, चालिसे, थापा, पाैडेल वा पाठक काे पर्छ त्याे भने अझै पनि गगन थापाकेा हातमा छ ।
थापाले महाधिवेशनमा कुन समूहबाट कुन पदमा उठ्ने बारे आफ्नाे धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । त्यसपूर्व उनी आफ्नाे निर्वाचन क्षेत्रमा याेग्य तथा आफू अनुकुल सभापति ल्याउने मुडमा छन् । उनकाे मुड अनुसारकाे व्यक्ति यिनै ५ जनामध्ये एक हाे वा अरू काेहि त्याे भने निर्क्याैल गर्न सकिएकाे देखिदैन ।